बीच मतभेद डेटिङ एक अमेरिकी केटी र एक इटालियन केटी
एक अमेरिकी केटी दिने उनको फोन नम्बर मतलब त्यो विचार छ तपाईं संग बाहिर लागिरहेको छ । प्राप्त गर्न लामो लिन पछि सबै, यो उनको नम्बर, एक विवाह घन्टी । त्यहि इटालियन बालिका, सही. हा । संग एक इटालियन केटी, तपाईं कठिन काम हुनेछ, बस प्राप्त गर्न उनको फोन नम्बर । सही दूर, त्यो गर्न चाहनुहुन्छ छ को एक विचार छ कसरी हार्ड तपाईं काम गर्न जाँदैछन् प्राप्त गर्न उनको ध्यान । इटालियन हामी भन्न (लगभग अनुवाद): जो उहाँले सुरु राम्रो छ गरेको छ । थाल्छन् । एक इटालियन केटी शायद छैन सोध्न तपाईं बाहिर पहिलो छ । वास्तवमा, लिन शायद दूर । उनको बाहिर सोध्न पहिलो, सधैं छ । पनि यो दोस्रो पटक हो । र यो तेस्रो पटक हो । एक अमेरिकी केटी छैन यति मा त्यो साधारण दूर चलान लागि, धेरै लामो वा धेरै टाढा छ । यदि त्यो भन्छन् त्यो जान सक्दैन जब तपाईं उनको बाहिर सोध्न एक मिति लागि, यो शायद साँचो हो । डाल धेरै अनुपयुक्त हुनेछ. एक इटालियन केटी सधैं जान्न चाहनुहुन्छ कसरी धेरै तपाईं को लागि काम गर्न तयार छ उनको । वास्तवमा त्यो कुनै भन्छन् पहिलो पटक बाहिर जान वा छैन.
लिन्छ पहिलो कुनै रूपमा असफल । यो एउटा चुनौती छ, त्यसैले यो स्वीकार । अमेरिकी बालिका ध्यान गर्न तिनीहरूले कसरी पोशाक, तर मान्छे छैन त धेरै । तिनीहरूले अक्सर छौं बुझयो देख रूपमा स्वीकार्य एक पटक तिनीहरूले न्यूनतम स्तर पूरा गर्न । इटालियन मान्छे ले समय को नै राशि प्राप्त गर्न तयार रूपमा अमेरिकी बालिका । एक हात मा, फैशन, शान, र स्वाद मा एम्बेडेड छन् इटालियन संस्कृति, त्यसैले इटालियन मान्छे टी पनि याद तिनीहरूले यो. तर इटाली, विशेष गरी पहिलो मिति लागि, देखिन्छ निश्चित गणना एक धेरै । एक अमेरिकी केटी समय लाग्न सक्छ दूर देखि उनको मित्र कुरा गर्न तपाईं मा एक रात बाहिर । त्यो पनि सक्छ खाडल उनको मित्र लागि आधा रात निर्भर, कसरी तपाईं मा रुचि त्यो छ । एक इटालियन केटी कहिल्यै छोड्न उनको मित्र एक्लै । त्यसैले, या त एक मित्र ताकि तपाईं सबै माथि जोडी, वा तपाईं आवश्यक एक अनौठो नम्बर, त्यो गरेर आफु वा, त्यसैले त्यो केही समय खर्च गर्न सक्छन् तपाईं संग किनभने त्यो पात दुई मित्र सँगै । अमेरिकी बालिका छन् धेरै कम मान्छे प्रयोग भइरहेको सज्जनहरु ढोका खोल्ने लागि महिला, उनको लागि प्रतीक्षा गर्न बस्न तपाईं पहिले बस्न, आदि.
साथै, अमेरिकी बालिका अक्सर प्रस्ताव साझेदारी गर्न बिल केही पछि मिति
इटाली मा, यो हुन जा छ धेरै लामो पहिले, एक केटी लागि दिन्छिन् कुरा गर्दा तपाईं बाहिर जाने लागि एक कफी पिउन खाने । इटालियन बालिका, आशा र माग, शिष्टता छ । ठीकै त छ । अमेरिकी बालिका जस्तै बेमतलबको जिस्क्याइले, तर तिनीहरूले छौं, धेरै प्रत्यक्ष छ । एक राम्रो इश्कबाज सधैं रमाइलो, तर सायद तिनीहरूले पनि यो गर्न प्रयोग गरिन्छ । लागि इटालियन बालिका, यो छ छैन मात्र चेरी केक को शीर्ष मा (हामी भन्न इटाली), यो एउटा कला छ पोख्त गर्न चाहनुहुन्छ भने मिति एक इटालियन केटी ।
← इटालियन परिवार नजिक भेनिस, इटाली लागि देख एक केटी वा केटा देशी अंग्रेजी मा हामीलाई मदत गर्न हाम्रो केटाहरू
सर्वश्रेष्ठ भिडियो च्याट. भावनाहरु, सबै भिडियो च्याट मा एक साइट →